एकैछिनम ७० लाख स’खाप भएपछि बाउछोरा रुदै मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 12, 2021 2558
गुल्मीका एक व्यावसायिक युवा सौभाग्य शाहको बाख्राको खोरमा आ’ग’ज’नि भएको छ । सौभाग्य शाहले वि’देशलाई त्या’गेर स्वेदश मै केही गर्ने उद्येश्यले व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालन गरेका थिए ।
उनले आफ्नै देश’मा केही गर्ने सोंचका साथ आ:फुलाई बाख्रा’को गोठालो बनाएका थिए । तर उनको यो कामलाई एकैछिनमा ख’रानी ब’नाईएको छ । उनको बा’ख्राको फ’र्मममा आ’गो ल’गा’ई’एको छ । आ’गो कस्ले ल’गायो यो अझैं पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
तर आ’गो’ले सौभाग्यको बाख्रा फर्म ज’ले’र पु’र्ण रुपमा न’ष्ट भएको छ । बाख्रा पाल:नबाट मनग्य आम्दानी गरेर आफ्ना गाउँका युवाहरुलाई केही रोज:गारी दिने सौभाग्य’को सपना बाख्रा’को खोर झैं ड’ढे’र च’क’ना’चुर भएको छ ।
घरको तलपट्टी बनाई’एको बाख्रा’को खोरमा राति सुतिरहेका सौभाग्य र उनका परिवारलाई पे’ट्रो’लको ग’न्ध आएपछि उनीहरु केको ग’न्ध हो भनेर बाहीर नि’स्किंदा तल रहेको बाख्रा’को खो’रमा आ’गो’ द’न्कि रहेको थियो ।
त्यो दृश्य देखेर ‘अ’त्ता’लिदै सौभाग्य र उनका परि’वार तल झ’र्दाझ’र्दै सबै न’ष्ट भईसकेको थियो ।सौभाग्य वडा अध्यक्षका छोरा पनि हुन् । उनले बाख्राको खोरमा आ’गो ला’गेको थाहा पाएर दौ’डिंदै खोरको ढोका खोल्दा आ’गोको ल’प्कोले उनको मुखको एकाप’ट्टीको भाग स’मेत ड’ढा’एको छ ।
उनका सबै सपना उनैको आखाँ अगाडी ज’ले’र न’ष्ट त भयो भयो साथै उनी आफु पनि ज’ले’का छन् । आफ्नै आखाँ अगाडी बोल्न नसक्ने ती अबोध जनावरले छ’टप’टिदै प्रा’ण त्या’गेको दृश्यले सौभाग्यलाई निकै नै पि’रोलेको छ । यो पि’डा यतिबेला जति सौभाग्यलाई छ उत्ति नै उनका सबै परिवारलाई पनि छ । भिडियोसहित
Prevबैंकमा पैसा लिन पुग्यो लाश, कर्म’चारीको गयो सातो…
Nextबिहानै खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस, तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ
आज नेपालका कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस् विवरणसहित
६० वर्षकी वेहुली २० वर्षका वेहुला, मिसकलले जुराएको हो यो विवाह [पूरा पढ्नुहोस्]
आज आईतबारको राशिफल हेर्दै तपाईको दिनको सुरुवात गर्नुहोस
यी हुन् बहादुर युवक प्रेम खड्का: जसले ८ पटक जिउँदै चितुवा समाते…हेर्नुहोस्…